९ बर्षमा १८ गर्लफ्रेन्ड बनाउने गायक जस्टिन बीबरले विवाह गर्ने, को हुन् हुनेवाली पत्नी ? – Todays Nepal
९ बर्षमा १८ गर्लफ्रेन्ड बनाउने गायक जस्टिन बीबरले विवाह गर्ने, को हुन् हुनेवाली पत्नी ?
उनीहरुको यो जोडीलाई विश्वकै लोभलाग्दो जोडीको रुपमा लिइयो । यसवीचमा उनीहरुले समुन्द्री तटमा डेटिङ जानेदेखि अनेक हर्कत गर्नसम्म भ्याए, जो मिडियाबाट लुक्न सकेन । अनुमान के गरिन्थ्यो भने, जस्टिन र सेलेनाले कुनै दिन औपचारिक रुपमै जोडी बाँध्नेछन् । हालै मात्र उनले आफ्ना लागि नयाँ जीवनसंगी छनौट गरिसकेका छन् । कुरा अझ एक कदम अगाडि बढिसकेको छ । अर्थात उनीहरुबीच इंगेजमेन्ट समेत भइसकेको छ ।
अर्को रमाइलो कुरा, उनी अभिनेता तथा निर्माता स्टीफन बाल्डवीनकी छोरी हुन् । अभिनेता एलेक बाल्डविनकी भतिजी ह्न् ।जस्टिनको करियरको ग्राफ उकालो लागेको पुग नपुग ९ बर्ष भयो । यसबीचमा उनले १८ जना गर्लफ्रेन्डसँग चक्कर मारे ।
त्यसपछि जस्टिन सोफिया रिचीसँग मस्ती गर्न थाले, जो चर्चित पप सिंगर पनि हुन् । सोफियापछि हेली बाल्डविन, एरियाना ग्रान्डे, केन्डल जेनर, जेड पियर्स, निकोल पेल्ट्ज, योवाना वेंचु्रा, शनीना शैक, मिरन्डा केर, बारबरा पालविनदेखि माइली साइरससम्म उनको अफेयर चल्यो । श्रोत अनलाइन खबर
अचम्मको घर गुडाएर जहाँ पनि लान सकिने ! हेरेर तपाईं चकित पर्नुहुनेछ
रुकुममा बस दुर्घटना १ को मृत्यु, १६ गम्भीर घाइते